Aims and Duties » Technological University (Monywa)
“Strength of the Nation with Power of Technology”
နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ‌ဒေသအဆင့် ယုံကြည် လက်ခံနိုင်သည့် အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ပေးသော နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။
To become the technological University producing the regionally and nationally-believable engineers.
အရည်အသွေးမှီနည်းပညာနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေး၊ ပညာသင်ဆု၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြန့်‌ဝေရန်။
စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်။
To distribute the high-quality technology and engineering education, scholarship, research and skills in innovations.
To make contact with the societies for developing the industry and technology.
တက္ကသိုလ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုအပ်ချက်များ၊ ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်း၏ လိုအျပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်(QMS) ကို နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)မှ လက်ခံကျင့်သုံးမည်။
သုံးစွဲသူများ (customers) ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်အောင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများ (customers) ၏ကျေနပ်မှုကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည်။
Technological University (Monywa) shall adopt Quality Management System meeting the university’s statutory and regulatory requirements and ISO 9001:2015 standard requirements.
Technological University (Monywa) is commited to achieving customers’ satisfaction by providing processes and services to continually improve the Quality Management System for fulfilling their needs and expectations in the best way.
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ရှိ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသည် သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသတွင်း အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ရှိ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာကောင်းများ မွေးထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းခေါ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇၅% ပြည့်မှီသူ ကျောင်းသားစုစုပေါင်း(၉၀%) ထိရှိရန်။
အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပြုန်းတီးမှုနှုန်း (droup out)သည် ၅% အောက်လျော့နည်းစေရန်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ISO 9001:2015 စံသတ်မှတ်ချက်အရနှင့် တက္ကသိုလ်၏ အရည်အသွေးမူဝါဒတို့အရ သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်မှု (Customer Satisfaction) ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်းကို ဆရာ/မ တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှု ၉၀% တုံ့ပြန်မှု ရရှိသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရန်။
သုံးစွဲသူများနှင့် Interested party များထံမှ complaints များရရှိမှု အကြောင်းအရာ (၅)ခုထက်မပိုစေရန်။
To cooperate by linking the engineering courses for undergraduates of Technological University (Monywa) with those from within ASEAN region in 2020;
In the (2017-2018) academic year,
To have 90% of total students who obtain at least 75% of student attendance in undergraduates engineering courses for producing well-qualified engineers;
To be less than 5% of drop-outs of students attending the undergraduates engineering courses;
To perform till 90% of student satisfaction regarding the teacher is obtained according to ISO 9001:2015 standard for Quality Management System and Quality Policy of the university;
To be not more than five different complaints from customers and interested parties;